९१ वर्षीय महिलासँग ३१ वर्षीय युवकले गरे विवाह, तर हनिमुनको क्रममा ओछ्यानमा घट्यो यस्तो गम्भीर घटना - Online Palanchok
९१ वर्षीय महिलासँग ३१ वर्षीय युवकले गरे विवाह, तर हनिमुनको क्रममा ओछ्यानमा घट्यो यस्तो गम्भीर घटना
काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ जस्तो केही न केही यस्ता खबरहरु आउँछन्, जुन पढेर मानिसहरु आश्चर्यचकित पर्छन्। अब यस खबरलाई एकछिनको लागि लिनुहोस् जुन हामीले तपाईको लागि ल्याएका छौं। ३१ वर्षीय एक छात्रले पढाई पूरा गर्नको लागि ९१ वर्षीय वृद्धासँग विवाह गरेका छन्। तर त्यसपछि जे भयो त्यो थाहा पाउनुभएमा तपाई झन् तीन छक्क पर्नुहुनेछ। जान्नुहोस् त्यस्तो के भयो कि युवक धन्न जेल जानबाट बचे।
एक यस्तो विवाह भयो जसको बारेमा सुनेर हरेक मानिस अचम्मित भए। अब तपाईको दिमागमा अनेक कुराहरु आउँन् सक्छ, विवाह त सबैको हुन्छ यसमा अचम्मको कुरा नै के छ र ? तर जब हामी तपाईलाई बताउँछौं दुलाहाको उमेर ३१ वर्ष र दुलहीको उमेर ९१ वर्ष, तब तपाई अवश्यै सोचमा डुब्नुहुनेछ। तर यस विवाह पछि हनिमुनको समयमा केही यस्तो भयो जुन जान्नुभएमा तपाईको होश उड्नेछ किनकी यो विवाह केही शर्तमा भएको थियो।
युवकले यसकारण गरेका थिए बूढी महिलासँग विवाह
अर्जेन्टिनाको यस खबर सुनेर सबैजना अचम्मित परेका छन्। अर्जेन्टिनाको एक ३१ वर्षीय युवक कानुन विषय अध्ययन गरिरहेका थिए। युवकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो। तर उनी जसरी भए पनि आफ्नो पढाई पूरा गर्ने सोचमा थिए। र त्यसको लागि उनी आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार थिए। उसको घरमा उसकी आमा र भाई छन् र घर नजिक एक ९१ वर्षीय वृद्ध महिला पनि बस्थिन्।
वास्तवमा के भयो भन्दाखेरी ९१ वर्षीय बूढी महिलाले युवकलाई बिहेको लागि प्रस्ताव राखिन्। र आफूसँग विवाह गरेमा पढाईको सम्पूर्ण खर्च दिने शर्त तेर्स्याईन्। युवकले बूढी महिलाको यस प्रस्तावलाई तुरुन्तै स्वीकारे र विवाह गर्नको लागि तयार भए। ३१ वर्षीय युवकसँग विवाह गर्नुको पछाडी कारण महिलाको पेन्सन थियो। उनले मासिक रुपमा पेन्सन पाउँथिन्। विवाह पछि यदि महिलाको मृत्यु भएमा उक्त पेन्सन युवकले पाउँछन् किनकी उनी पति बन्दै छन्।
धन्न जेलबाट जोगिए !
तर कहानीमा त्यस समय अनौठो मोड आयो जब ९१ वर्षीय वृद्धा हनिमुनको लागि आफ्नो ३१ वर्षीय पतिसँग गईन्। तर केही समयमै महिलाको ओछ्यानमै सास गयो। जब युवकले पेन्सनको लागि आवेदन दिए तब सरकारी अधिकारीहरु उनी माथि खनिए। उनी माथि वृद्धा हत्या र सम्पत्ति हडपेको आरोप लगाईयो। तर उनी धन्न जेल जानबाट बचे। एजेन्सी
तपाईको भाग्य परिवर्तन हुने र छिट्टै धनि बन्ने यी ५ संकेतहरु जन्नुहोस ! जानी राखौ
हनुमानजीको यी ५ मन्त्र जप गरे जागिर, व्यवसाय र प्रेममा मिल्नेछ लाभ!
चन्द्रमा कर्कट राशीमा गोचर हुँदा भोलिबाट यी राशिको चम्कनेछ भाग्य !
३९ वटी श्रीमतिको एउटै श्रीमान: खाना खर्च मात्रै डेढ लाख, परिवारिक सदस्य सुन्दा अच्चम पर्नुहुनेछ…
यस्तो गाँउ जहाँ मान्छेको दाँतले काटेर ६४ वटा बोका मार्छन्
Posted in रोचक बिचित्र
Prevजब संजयदत्त रणबीर–दिपिकाको पार्टीमा पुगे, कसले भनिरह्यो संजयदत्तलाई उनको श्रीमतीकै अगाडि ‘बाबा आइ लभ यू, बाबा आइलभ यू’ (भिडियो सहित)
Nextदुई दुई पटक देशका राष्ट्रपति बनेका छोरी विद्यादेवी राष्ट्रपति भवनमा , आमा चाँहि वृद्धाश्रममा / आमा भन्छिन छोरीको खुसी नै मेरो खुसी हो (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
अपहरणकारीलाई जालमा पार्न यसरी सफल भए नेपाल प्रहरी, चलाखीपूर्वक जोगाए अपहरणमा परेका बालक
विध्वंस्तामक कार्यमा संलग्न भएको भन्दै विप्लव र सिकेको चार सय बढी कार्यकर्ता पक्राउ
मलेसिया रोजगारी : पुराना दलालहरुकाे चलखेल बढ्याे, मन्त्री नयाँ ल्याउने अडानमा
दुखद खबर : दाङको लमहीमा स्कारपियो र बस एकआपसमा ठोक्किदा भयो भयानक दुर्घटना , ६ जनाको ज्यान गयो , दुई जना घाइते
घरमा श्रीमती छँदैछे भनेर ढुक्क बस्नेका लागि दुःखद… (305)
वैज्ञानिकहरूले गरे दाबी नेपालमा २०७२ सालको भन्दा बढी… (210)
चोर बाटोबाट अमेरिका पुग्ने सपनाले २३ नेपालीको… (194)
आफैंले किरिया गरेका पतिसँग फेरि बिहे गरेकी सन्तोषीको… (174)
भर्खरै कन्चनपुरबाट आयो अर्को ठुलो घटनाको खबर… (160)